ပုသိမ်ကျောက်မီးသွေးသုံး စက်ရုံ အတွက် တရုတ်ခြေလှမ်း...
6 ธ.ค. 2562 - 00:48 น.
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ပုသိမ်မြို့မှာ ဖွင့်လှစ်မယ့် ပုသိမ်စက်မှုဇုန်မှာ တရုတ်ယူနန် Union Resources and Engineering Company Limited နဲ့ ADPCL ဧရာဝတီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်တို့က ကျောက်မီးသွေးစက်ရုံ တည်ဆောက်ဖို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ စာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်တယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်သံရုံးက ဒီဇင်ဘာ ၃ ရက်နေ့က သတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။
ပုသိမ်စက်မှုဇုန်ထဲမှာ ၃၅၀ မဂ္ဂါဝပ်ရှိတဲ့ ကျောက်မီးသွေးသုံး လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ တွေ တည်ဆောက်ဖို့ လက်မှတ်ရေးထိုးတဲ့နေရာမှာ တရုတ်သံရုံးက နိုဝင်ဘာ ၂၉ ရက်က အသိသက်သေ လုပ်ခဲ့တာလို့ လည်းဖော်ပြပါတယ်။
ဒါအပြင် ပုသိမ် စက်မှုဇုန်မှာ တရုတ်အထည်ချုပ်စက်ရုံ Texplus အတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခွင့်ပြုချက်လက်မှတ် ပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာပါပါတယ် ။
ပုသိမ်စက်မှုမြို့တော် ဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒုတိယလူဦးရေအများဆုံး ဧရာဝတီတိုင်း ရဲ့မြို့တော် ပုသိမ်မြို့မြို့ပြင်မှာ တညိရှိပြီးတော့ ပုသိမ်-ငပုတော ကားလမ်း နဲ့ပုသိမ်မြစ်(ငဝန်မြစ်) အကြားက မြေဧက ၆၇၀၀ ကျော် အကျယ်အဝန်း တည်ဆောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။
တရုတ်သံရုံးက ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့ တရုတ်-မြန်မာနှစ်ဦးနှစ်ဖက်က တရုတ်ယူနန် Union Resources & Engineering Company Limited (UREC) နဲ့ ဧရာဝတီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အများပိုင်ကုမ္ပဏီလီမိတက်တို့ ပုသိမ်စက်မှုဇုန်အတွင်း2x350မဂ္ဂါဝပ်ကျောက်မီးသွေးဓာတ်အားပေးစက်ရုံတည်ဆောက်ရေးစီမံကိန်းအတွက်မူဘောင်စာချုပ် လက်မှတ်ရေးထိုး တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဧရာဝတီတိုင်းအစိုးရ ကထုတ်ပြန်တဲ့ သတင်းတွေမှာ တော့တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးနဲ့ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ကလာရောက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာ ADPCL ကုမ္ပဏီနဲ့ UREC ကုမ္ပဏီတို့အကြား သဘောတူစာချုပ် လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲ အခမ်းအနားကို ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံးမှာ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၂၉)ရက်နေ့၊ နံနက် (၁၀)နာရီအချိန် က ကျင်းပခဲ့တယ်လို့ ဖော်ပြပါတယ်။
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရဘက် ကတော့ ကျောက်မီးသွေးသုံးလို့ဖော်ပြတာ မတွေ့ရပါဘူး။
ကျောက်မီးသွေးသုံး ဓာတ်အားပေးစက်ရုံတွေဟာ ရေ၊ လေ၊ မြေ စတဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်၊ ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုအပါအဝင် လူမှုပတ်ဝန်းကျင်တွေကိုပါ ထိခိုက်စေနိုင်တာကြောင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးပညာရှင်တွေ၊ အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ဒေသခံတွေအများစုကတော့ ကန့်ကွက်မှုတွေရှိပါတယ်။
ကရင်ပြည်နယ် မှာတော့ ဒေသခံတွေ ကန့်ကွက်နေတဲ့ အတွက် ကျောက်မီးသွေး ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ စီမံကိန်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ ကျေးရွာသားတွေ ၊ ကရင်ပြည်နယ် အစိုးရ ၊ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေက ကိုယ်စားလှယ်တွေ ၊ အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ့် ကုမ္ပဏီဘက်က တာဝန်ရှိသူတွေ ပါတဲ့ ဆွေးနွေးပွဲ တွေလုပ်ခဲ့ရပါတယ်။
နိုဝင်ဘာလ၂၉ရက်နေ့မှာ ပဲ ပုသိမ်စက်မှု မြို့တော် Pathein Industrial City စီမံကိန်း ဧရိယာအတွင်း က မြေဧက ၅၀ မှာ ပထမ အဆင့် စီမံချက် ချမှတ်ပြီး အမေရိကန် ဒေါ်လာ သန်း ၂၀၀ ရင်းနှီး မြုပ်နှံတဲ့ ဧရာဝတီ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ စက်မှု ဆိပ်ကမ်း (ပုသိမ်)ကို ဆိပ်ကမ်း ပင်လယ်ကူး သင်္ဘောဆိပ် (Jetty) ရတနာ ပိုင်တိုင် စိုက်ထူက်ပြီးဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ် ။
ပုသိမ်-ငပုတော ကားလမ်းဘေးက ပုသိမ်စက်မှုဇုန်ဒီစီမံကိန်းမှာ ကုန်စည်ပိုင်းဆောင်ဖို့၊ ဒေသထွက်ကုန်ပစ္စည်းတွေ တင်ပို့ရောင်းချဖို့အတွက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဆိပ်ကမ်းတစ်ခု ပါဝင်တယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးလှမိုးအောင်က ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လုပ်ငန်းတွေကို လွယ်ကူချောမောစွာ ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပြီး တရုတ်နိုင်ငံကလာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများစွာရှိကြောင်း၊ ၊ အခုတွေ့ဆုံပွဲ မှာတရုတ်နိုင်ငံဘက် က လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု (၁)ခုကိုလည်း အတည်ပြုမိန့် ပေးအပ်သွားမည်ဖြစ် တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်ကလည်း အဲဒီနေ့က ပုသိမ်စက်မှုမြို့တော်စီမံကိန်းအတွင်း အကောင်အထည်ဖော်မယ့် ပထမဦးဆုံးအထည်ချုပ်စက်ရုံဖြစ်တဲ့ TEX PLUS GARMENT CO.,Ltd သို့ MIC Permit ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။
ကျောက်မီးသွေးသုံးစက်ရုံ စီမံကီန်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ ဘယ်လိုတည်ဆောက် မယ်ဆိုတာ ကိုတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ အခုထိတော့ အသေးစိတ်ထုတ်ပြန်တာမျိုးမရှိသေးပါဘူး။
อัลบั้มภาพ ပုသိမ်ကျောက်မီးသွေးသုံး စက်ရုံ အတွက် တရုတ်ခြေလှမ်းစ